एनआरएन चुनाव | Ratopati
ए नारान : टाईसुटमा ठाँटिएका एनआरएनको पाँच तारेमा उपद्रो ! access_timeअसोज ३०, २०७६
नेपालीमा एउटा भनाइ छ– पढ्यो पढ्यो पाठ १६ दुना आठ ! जति सिकाइ र ज्ञान हासिल भए पनि दिमागले सही कुरा ग्रहण गर्न नसकी उही गलत पक्षलाई नै अँगालिरहने सन्दर्भमा यो भनाइको प्रयोग गरिन्छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को नवौँ विश्व सम्मेलन काठमाडौँमा चलिर...
एनआरएन चुनाव स्थगित, मतदानस्थलमा नाराबाजी access_timeअसोज २९, २०७६
काठमाण्डौं – आज साँझ अवेर गरि सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघको मतदान स्थगित भएको छ । विद्युतीय (इलोक्टोनिक) मतदान सुरु भएको केही समयमै प्राविधिक समस्या आएपछि बिहीबार १० बजे सम्मका लागि मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयुक्त शिव रिजालले जनाए । ...
एनआरएन संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोद्वारा नवौं विश्व सम्मेलन बहिष्कार access_timeअसोज २८, २०७६
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको विश्व सम्मेलन वहिस्कार गरेका छन् । संघमा अस्वभाविक राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेका कारण उनी नवौं विश्व सम्मेलनमा सहभागी नभएका हुन् । एनआरएन के...
एनआरएनए विश्व सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु (फोटोफिचर) access_timeअसोज २८, २०७६
काठमाडौं–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक विशेष समारोहका बीच सम्मेलनको उद्घाटन गरेकी हुन् । ‘म, मेरो, एनआरएनए र मेरो नेपाल’ भन्ने नारासहित...
एनआरएनए अध्यक्षमा कुल आचार्यको उम्मेदवारी घोषणा, के–के छन् एजेन्डा ? access_timeअसोज ७, २०७६
काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा वर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्यले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । मंगलबार बेलायतको लन्डनमा आयोजित सभामार्फत औपचारिकरुपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तय भएको आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यले लण्डनबाट ...
एनआरएन विश्व सम्मेलनको मिति परिवर्तन access_timeभदौ ५, २०७६
काठमाडौं–विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको छाता संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को नवौ विश्व सम्मेलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हेरफेर भएको छ । एनआरएनका केन्द्रीय सदस्य रामशरण सिम्खडाले यसअघि तय भएको मिति परिवर्तन गरेर सम्मेलन अक्टोबर १५ देखि १७ सम्मको लागि त...